Luís Figo oo la taliyay Cristiano Ronaldo, isagoo dhinaca kale ka hadlay is casilaada Zidane – Gool FM
Luís Figo oo la taliyay Cristiano Ronaldo, isagoo dhinaca kale ka hadlay is casilaada Zidane
(Real Madrid) 07 Juunyo 2018. Halyayga reer Portugal Luis Figo ayaa la taliyay xidiga ay isku dalka kasoo wada jeedaan ee Cristiano Ronaldo, isagoo dhinaca kale ka hadlay is casilaada macalinka reer France ee Zinedine Zidane kasoo isaga dhaqaaqay shaqada Real Madrid isbucii lasoo dhaafay.
Luis Figo ayaa carabka ku adkeeyay in Real Madrid ay tahay kooxda ugu fiican aduunka, isla markaana ay wanaagsan tahay in Cristiano Ronaldo uu ku dhameysto xirfadiisa kubada cagta.
Wareysi uu bixiyay Figo ayaa waxaa soo xigtay wargeyska “Marca” ee dalka Spain “Inta badan waxa aad rabto ama aad sameenayso kuguma tiirsana, laakiin waxaa jira arrimo kale aysan ogeen dadka kaa fog”
Figo oo fariintiisa si toos ay ugu socotay Cristiano Ronaldo ayaa wuxuu yiri: “balse waxay macno u tahay in isaga waxa uu halkan kaga guuleestay inuusan ku gaari doonin meel kale, Real Madrid waxay siisay sharaf badan, waxayna ka caawisay in si shaqsiyan oo gaar ah uu u guuleysto”.
Intaas kadib halyayga xulka qaranka Portugal ayaa wuxuu ka hadlay bixitaanka Zidane wuxuuna sheegay: “Waa saaxiibkey, wax walba uu sameyay waa wax fiican aniga sida ay ila tahay, kadib wax wax walba uu soo sameeyay sanadihii lasoo dhaafay”.
“Wuxuu gaaray meesha ugu sareysa, go’aankiisa wuxuu ahaa mid cajiib ah, balse waxaa haboon in la ixtiraamo go’aaanka”.